7-xeelad oo Ninku ku kordhin karo awooddiisa Raganimo ee galmada (Talo muhiima) | shumis.net
Home » galmada » 7-xeelad oo Ninku ku kordhin karo awooddiisa Raganimo ee galmada (Talo muhiima)
7-xeelad oo Ninku ku kordhin karo awooddiisa Raganimo ee galmada (Talo muhiima)
Weligaa ma dareentay ceeb iyo yaxyax, marka aad tagtay sariirta, qancin la’aanta xaaskaada awgeed.?
Weligaa gaarigu makaaga damey meel geeri go’an ah adigoon gaarin hoygaadii?
Weliga ma istiri oo niyaddaada ma u sheegtay waad jirran tahaye bal is dawee.?
Haddaba haddii su’aalaha kor ku xusan jawaabaha aad ka bixisay ay HAA u badan yihiin, warbixintan iyo talooyinkan hoos ku qoran sii akhriso, waad ka faa’iidi doontaaye.
Xusuuso oo qalbiga ku haay xubin taran oo adag oo xooggani waa waxa ay dumarku doorbidaan (baahi badanna u qabaan) marka howsha galmada ee macaan lagu guda jiro.
Sidaas awgeed toddobadaan talo ee Shumis.net ay ku siineyso ayaa kaa caawinaya sidii geedkaadu u noqon lahaa garruun adag oo haweeneydaadu si fiican ugu gama’do marka howsha gogoshu dhammaato.
Title: 7-xeelad oo Ninku ku kordhin karo awooddiisa Raganimo ee galmada (Talo muhiima)